Horohoron-tany mahery 6.1 Magnitude namely an'i Tokyo, tsy nisy fampitandremana tsunami
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Japon » Horohoron-tany mahery 6.1 Magnitude namely an'i Tokyo, tsy nisy fampitandremana tsunami
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Japon • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Tsy misy atahorana ny tsunami any Japon aorian'ny horohoron-tany, fa mampitandrina kosa ny seismologists fa mety hisy horohoron-tany mahery vaika.
Nisy ny rafitra fampitandremana vonjy maika tany an-dalambe tao an-drenivohitra Japoney rehefa nisy horohoron-tany mafy tany Tokyo.
Ny ivon'ireo lohataona ambanin'ny tany dia teo amin'ny sisintanin'i Tokyo sy prefektioran'i Chiba.
Tsy nisy ny tsy fatiantoka notaterina avy amin'ny toby nokleary Tokai No.2 ao amin'ny Ibaraki Prefecture akaikin'i Tokyo.
The Agency Meteorological Japoney nitatitra fa nisy horohoron-tany 6.1 tamin'ny tanjaka mahery vaika izay nampihozongozona ny faritry ny tanànan'ny Tokyo androany.
Ny ivon'ilay horohoron-tany dia teo amin'ny sisin-tanin'i Tokyo ary ny prefektioran'i Chiba, amin'ny halavirana 80 kilometatra.
Nikorontana ny tranobe tao an-drenivohitra Japoney satria nivoaka ny arabe ny rafitra fampitandremana maika.
Tsy nisy ny tsy fetezana notaterina avy amin'ny toby nokleary Tokai No.2 ao amin'ny Ibaraki Prefecture akaikin'ny Tokyo, hoy ny tatitra.
Tsy nisy maty, naratra na simba ara-drafitra nateraky ny horohorontany hatreto.